အဖေ့ဓား | MoeMaKa Burmese News & Media
အဖေထွက်ခွာ နတ်ရွာဆီ ….
အနေခက်လာ ရပ်ရွာပြည် ….
အချေပျက်ကာ ငတ်ရှာပြီ ….
အမွေဖျက်ခါ တပ်မှာညှီ …။ ။